1 Ndị Eze 15 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
1 Ndị Eze 15:1-34
15 N’afọ nke iri na asatọ nke ọchịchị Eze Jeroboam+ nwa Nibat,+ Abaịjam ghọrọ eze Juda.+
2 Afọ atọ ka ọ chịrị na Jeruselem; aha nne ya bụ Meaka+ nwa nwa Abishalọm.+
3 O wee na-eje ije ná mmehie niile nna ya mere tupu ya onwe ya; obi ya dum adịghịkwa+ n’ebe Jehova bụ́ Chineke ya nọ, dị ka obi Devid nna nna ya.+
4 Ọ bụ n’ihi Devid+ ka Jehova bụ́ Chineke ya ji nye ya oriọna+ na Jeruselem site n’ibuli nwa ya nke nọchiri ya elu na ime ka Jeruselem dịgide,+
5 n’ihi na Devid mere ihe ziri ezi n’anya Jehova, ọ hapụghịkwa ihe ọ bụla O nyere ya n’iwu n’ụbọchị niile nke ndụ ya,+ ma e wezụga n’ihe banyere Yuraya onye Het.+
6 Agha dịkwa n’etiti Rehoboam na Jeroboam n’ụbọchị niile nke ndụ ya.+
7 Ma ihe ndị ọzọ metụtara Abaịjam na ihe niile o mere, ọ̀ bụ na e deghị ha n’akwụkwọ+ ihe ndị mere n’ụbọchị ndị eze Juda? Agha dakwara n’etiti Abaịjam na Jeroboam.+
8 N’ikpeazụ, Abaịjam sooro nna nna ya hà dinaa, ha wee lie ya n’Obodo Devid;+ Esa+ nwa ya wee malite ịchị n’ọnọdụ ya.
9 N’afọ nke iri abụọ nke ọchịchị Jeroboam eze Izrel, Esa ghọrọ eze Juda.
10 Ọ chịrị afọ iri anọ na otu na Jeruselem; aha nne ya ochie bụ Meaka+ nwa nwa Abishalọm.+
11 Esa wee mee ihe ziri ezi n’anya Jehova, dị ka Devid nna nna ya.+
12 Ya mere, o mere ka ndị ikom bụ́ ndị akwụna ụlọ arụsị pụọ n’ala ahụ,+ wepụkwa arụsị niile na-asọ oyi ka nsị+ bụ́ ndị nna nna ya hà mere.+
13 Ma ọ chụturu Meaka+ nne ya ochie ka ọ ghara ịbụkwa nnukwu nwaanyị,+ n’ihi na o meere ogwe osisi dị nsọ arụsị jọgburu onwe ya; e mesia, Esa gbuturu arụsị ya nke jọgburu onwe ya+ ma kpọọ ya ọkụ+ na ndagwurugwu Kidrọn.+
14 O wepụghịkwa+ ebe ndị dị elu.+ Otú o sina dị, obi dum Esa adịghị n’ebe Jehova nọ n’ụbọchị ya niile.+
15 O wee malite iwebata n’ime ụlọ Jehova ihe niile nna ya doro nsọ na ihe niile ya onwe ya doro nsọ, bụ́ ọlaọcha na ọlaedo na arịa dị iche iche.+
16 Agha dịkwa n’etiti Esa na Beasha+ eze Izrel n’ụbọchị ha niile.
17 Ya mere, Beasha eze Izrel busoro Juda agha wee malite iwu Rema,+ ka ọ ghara ikwe ka onye ọ bụla pụọ ma ọ bụ bata n’ebe Esa eze Juda nọ.+
18 Esa wee were ọlaọcha niile na ọlaedo ndị fọdụrụ n’akụ̀ dị n’ụlọ Jehova na akụ̀ dị n’ụlọ eze tinye n’aka ndị na-ejere ya ozi; Eze Esa wee ziga ha ka ha gakwuru Ben-hedad+ nwa Tabrimọn nwa Hiziọn eze Siria,+ bụ́ onye bi na Damaskọs,+ sị:
19 “Mụ na gị gbara ndụ, nna m na nna gị gbakwara ndụ. Lee, eziteworo m gị onyinye+ ọlaọcha na ọlaedo. Bịa mebie ọgbụgba ndụ gị na Beasha eze Izrel, ka o wee hapụ m.”+
20 Ben-hedad wee gee Eze Esa ntị ma ziga ndị isi ndị agha ya, ha wee buso obodo ndị dị n’Izrel agha wee bibie Aịjọn+ na Dan+ na Ebel-bet-meaka+ na Kineret dum, ruo ala Naftalaị dum.+
21 O wee ruo na ngwa ngwa Beasha nụrụ ya, ọ kwụsịrị iwu Rema+ ozugbo wee na-ebi na Teza.+
22 Ma Eze Esa kpọkọtara Juda dum,+ ọ dịghị onye a hapụrụ, ha wee buru nkume Rema na osisi ya, bụ́ ndị Beasha ji na-ewu ihe owuwu; Eze Esa wee jiri ha malite iwu Giba+ nke dị na Benjamin, nakwa Mizpa.+
23 Ma ihe ndị ọzọ niile metụtara Esa na ike niile ọ kpara na ihe niile o mere na obodo ndị o wuru, ọ̀ bụ na e deghị ha n’akwụkwọ+ ihe ndị mere n’ụbọchị ndị eze Juda? Ọ bụ naanị na mgbe ọ na-eme agadi,+ ọrịa tụrụ ya n’ụkwụ.+
24 N’ikpeazụ, Esa sooro nna nna ya hà+ dinaa, e wee lie ya n’ebe e liri nna nna ya hà n’Obodo Devid nna nna ya,+ Jehọshafat+ nwa ya wee malite ịchị n’ọnọdụ ya.
25 Ma Nedab+ nwa Jeroboam ghọrọ eze Izrel n’afọ nke abụọ nke ọchịchị Esa bụ́ eze Juda; o wee na-achị Izrel afọ abụọ.
26 O wee na-eme ihe jọrọ njọ+ n’anya Jehova, na-ejekwa ije n’ụzọ nna ya+ nakwa ná mmehie ya nke o ji mee ka Izrel mehie.+
27 Beasha+ nwa Ahaịja onye ụlọ Ịsaka malitere ịgbara ya izu; Beasha wee gbuo ya n’obodo Gibetọn,+ bụ́ nke ndị Filistia, mgbe Nedab na Izrel niile nọchibidoro Gibetọn.
28 Ya mere, Beasha gburu ya n’afọ nke atọ nke ọchịchị Esa bụ́ eze Juda, wee malite ịchị n’ọnọdụ ya.+
29 O wee ruo na ozugbo ọ ghọrọ eze, o gburu ndị ezinụlọ Jeroboam niile. O kweghị ka onye ọ bụla nke na-eku ume fọdụrụ Jeroboam, ruo mgbe ọ lara ha n’iyi, dị ka Jehova kwuru site n’ọnụ ohu ya bụ́ Ahaịja onye Shaịlo,+
30 n’ihi mmehie niile Jeroboam mere, ndị o jikwa mee ka Izrel mehie,+ sitekwa n’ihe mkpasu iwe ya ndị o ji kpasuo Jehova bụ́ Chineke Izrel iwe.+
31 Ma ihe ndị ọzọ metụtara Nedab na ihe niile o mere, ọ̀ bụ na e deghị ha n’akwụkwọ+ ihe ndị mere n’ụbọchị ndị eze Izrel?
32 Agha dịkwa n’etiti Esa na Beasha bụ́ eze Izrel n’ụbọchị ha niile.+
33 N’afọ nke atọ nke ọchịchị Esa eze Juda, Beasha nwa Ahaịja ghọrọ eze Izrel dum wee chịa afọ iri abụọ na anọ na Teza.+
34 O wee na-eme ihe jọrọ njọ n’anya Jehova,+ na-ejekwa ije n’ụzọ Jeroboam+ nakwa ná mmehie ya nke o ji mee ka Izrel mehie.+
1 Ndị Eze 15
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D11%26Chapter%3D15%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl